कास्की– २ मा नेकपाको राजनीति : किन रोकियो विद्यालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न ?
पोखरा– आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको एक मात्र सीट कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा धेरैको चासो बढेको छ । गत वर्ष फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
उपनिर्वाचनमा नेकपाका तर्फवाट रवीन्द्रपत्नी समेत रहेकी नेतृ विद्या भट्टराई प्रमुख दाबेदार हुन । नेकपा कास्की जिल्ला कमिटीले कात्तिक ८ मा विद्या भट्टराईलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्ट कात्तिक ९ गते बसेको नेकपा प्रदेश कमिटीको बैठकले विद्यासँगै सोमनाथ अधिकारी प्यासी र राजकाजी गुरुङको नाम समेत सिफारिस गरेको छ ।
विद्यासँगै अन्य दुई जनाको नाम सिफारिस भएपछि नेकपाभित्र उम्मेदवार छान्ने विषयले तरंग सिर्जना गरेको छ । ‘हामीले सर्वसम्मत ढंगले गरेर विद्याको नाम केन्द्रलाई सिफारिस गरेका छौं, प्रदेशले पनि पठाएको थाहा पायौं, केन्द्रले उचित निर्णय लिने विश्वास छ,’ नेकपाका कास्की जिल्ला सह–इञ्चार्ज चूडामणि जंगलीले लोकान्तरसँग भने ।
अहिलेसम्म साझा पार्टीले उम्मेदवार छानेर प्रचार–प्रसार शुरू गरिसकेको छ भने कांग्रेसले उम्मेदवार छान्न सकेको छैन । कांग्रेस जिल्ला समितिले १६ जनाको नाम केन्द्रमा पठाएको छ ।
कांग्रेसका जिल्ला नेताहरूका अनुसार २०७४ सालमा रवीन्द्रसँग चुनाव लडेका देवराज चालिसे नै उम्मेदवार बन्ने सम्भावना प्रबल छ । यसका अतिरिक्त सोभियत अधिकारीको पनि चर्चा छ । शुरूमा केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ समेत यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने चर्चा चलेको थियो ।
किन थपियो दुई नाम ?
रवीन्द्र अधिकारीको निधनसँगै कास्की २ मा विद्याको चर्चा शुरू भएको थियो । शुरू–शुरूमा अन्य नेताको समेत चर्चा चलेपनि कास्कीमा विद्याको विकल्प नभएको निष्कर्षमा नेकपामा शीर्र्षनेताहरू पुगिसकेका छन् ।
कात्तिक ८ गते बसेको नेकपा जिल्ला कमिटीको बैठकमा बोलेका ३८ जना मध्ये २८ जनाले विद्याको नाम प्रस्ताव गरेपछि जिल्ला कमिटिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको थियो । जिल्ला कमिटीमा रहेका १ सय ५५ जनामध्ये अधिकांश सदस्य मौन बसेका थिए ।
विद्यार्थी कालमा अखिलको राजनीति गरेकी विद्या अहिले काठमाडौंको आरआर क्याम्पसमा पढाउँछिन् । चुनाव लड्न उनले सरकारी जागिरबाट भने राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
कात्तिक ८ मा विद्याको नाममा सर्वसम्मति भएको भोलिपल्टै प्रदेश कमिटिले दुई नाम थपेपछि नेकपाभित्र विवाद रहेको सन्देश बाहिर फैलियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेकपाको गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज हुन् । उनकै रुचिमा सोमनाथ प्यासी र राजकाजी गुरुङको नाम परेको नेकपाभित्र चर्चा छ । तर पनि अन्तिममा विद्याको नाममै सर्वसम्मति हुने जिल्ला नेताहरूको दाबी छ ।
‘केन्द्रीय निर्वाचन विभागले तीनजनाको नाम मागेका कारण विद्यासँगै दुई जनाको नाम थपेर पठाइएको हो, अन्तिममा विद्याको नाममै सर्वसम्मति हुन्छ,’ नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटीका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
विद्यासँगै सिफारिस भएका प्यासी कास्कीका पुराना वामपन्थी नेता हुन् भने राजकाजी गुरुङ २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा कास्की २ (ख) बाट नेपाली कांग्रेससँग पराजित भएका थिए ।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा भने गुरुङ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका थिए । पूर्व माओवादी पक्षलाई समेत सन्तुलन गरेर जानका लागि गुरुङको नाम सिफारिस गरेको प्रदेश कमिटीका एक सदस्य बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोलेका ३१ जना मध्ये २९ जनाले विद्याको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘सोमनाथ प्यासी कमरेड कास्कीमा वामपन्थी राजनीतिमा योगदान गरेको व्यक्ति हो, तर उपनिर्वाचनमा मुख्य दाबेदार होइन, प्रदेशले नाम सिफारिश गरेको मात्र हो,’ नेकपा कास्की जिल्ला कमिटीका एक सदस्यले भने । प्यासीको नाम तत्कालीन नेकपा एमालेले २०७४ सालमा बुझाएको समानुपातिकको सूचीमा समेत रहेको छ ।
कस्तो छ चुनावी अंकगणित ?
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवार तत्कालीन नेकपा एमालेका रवीन्द्र अधिकारी २७ हजार २ सय ७ मत पाएर विजयी भएका थिए । निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत पाएका थिए । प्रदेश सभामा लागि एक सीट नेकपा र एक सीट नेपाली कांग्रेसले हात पारेका थिए ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा यसपटक साझा पार्टीले रजनी केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेकी केसीको उम्मेदवारीले लोकतान्त्रिक आस्थाका भोट काटिने नेकपाको विश्लेषण छ । नेपाली कांग्रेसले भने नेकपा सरकारको अलोकप्रियताका कारण कास्कीमा नतिजा उल्टिने दबी गरेको छ ।
‘चुनाव लडुञ्जेल मात्र आफू पार्टीको उम्मेदवार, जितेपछि जनताको साझा प्रतिनिधि हुँ भन्ने रवीन्द्रको स्वभावका कारण नेकपाबाहेक विपक्षीहरूले पनि उहाँलाई मन पराउँथे,’ रवीन्द्र अधिकारी संसदको विकास समितिको सभापति र संस्कृति पर्यटन मन्त्री रहेको समयमा उनको पीए समेत रहेका नेकपा गण्डकी प्रदेश सम्पर्क कमिटीका सदस्य राजेन्द्र आचार्य भन्छन्, ‘विद्या भट्टराई उठ्दा कास्की २ मा चुनाव जित्न सजिलो छ । ’
मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ मा उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका छ ।
नेपाली कांग्रेसले कात्तिक १७ गतेसम्म उम्मेदवार छानिसक्ने बताएको छ भने नेकपाले सचिवालय बैठक बसेर उम्मेदवारी टुंगो लगाउने जनाएको छ ।
मंसिर १४ गते प्रतिनिधि सभाको कास्की २ को सीटका अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका अन्य रिक्त सीटमा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
चुनावी नारा मात्र नहोस् - नेपाली भू–भाग भारतीय नक्सामा परेपछ...
देउवाले सिकाउन खोजेको लोकतन्त्रको संस्कार
कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण : भारतीय पक्षको चुनौती– नेपालले आ...
प्रधानमन्त्रीको टीम हेरफेर : सूचना चुहाउनेदेखि गुमराहमा राख्न...